कयौं वर्षदेखि हामी विभिन्न मोडलको फोन देख्दै आएका छौं । चाहे त्यो फ्लिप फोन होस वा स्लाइड आउट फोन । धेरै फोनहरु धेरै हदसम्म उस्तै देखिन्छ ।फरक यति हुन्छ, कुनै फोनको बटन एकातिर हुन्छ भने केही फोनको अर्कोतिर । तर कयौं पटक फोनको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा हामी सोच्दैनौँ । तपाईंले पनि यस्तो कुरामा ध्यान दिनु भएको छैन होला ।
के तपाईले कहिले फोनको साइडमा राखिएको लाइनलाई देख्नुभएको छ ? यदि छ भने यो के हो भन्ने तपाईलाई थाहा नै होला । यदि छैन भने आज हामी तपाईंलाई बताउन गइरहेका छौं ।
फोनको साइडमा राखिएको यो लाइनको अर्थ के हो ?
फोनको साइडमा राखिएको यो लाइनको अत्यन्त ठूलो महत्व छ । यो एन्टेना लाईन हो । आजकल कयौँ फोनमा यो लाइन राख्न थालिएको छ । यो लाइनले वास्तवमा सानो झ्यालको रुपमा काम गर्छ । तर, यो प्रकाशका लागि नभएर रेडियो वेब्सका लागि हुने गर्छ । तपाईको फोनमा इन्टरनल ब्लूटूथ, वाईफाई र एलटीई÷फाइभ–जी एन्टिनाबाट जुन वेब्स आउँछ यसले तपाईको फोनलाई इन्टरनेटसँग जोड्छ । यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेबसाइट हो । यसले तपाईंको फोनलाई एक वास्तविक संचार डिभाइस बनाउँछ ।
यद्यपि, सबै फोनलाई यी लाइनको आवश्यकता पर्दैन । जुन फोन पहिलेनै प्लास्टिकबाट बनेको हुन्छ , यसले रेडियोवेब्सलाई अत्यन्त पारदर्शी हुन्छ । यसै किसिमले सीसाले रेडियो वेब्सलाई अनुमति दिन्छ । तर यो प्लास्टिकको जस्तो सहज हुँदैन ।
अब कुरा गरौं ग्लास बैंक भएको फोन जसमा धेरै धातुको फ्रेम हुन्छ । यसमा अझैपनि केही साना एन्टिना लाइन हुन्छ । एन्टिना लाइन फोन डिजाइनका लागि कुनै जादूको छडी होइन । तर यो तपाईको हातबाट अवरोध पुग्यो भने तपाईलाई नेटवर्क वा इन्टरनेट प्राप्त गर्नमा समस्या आउन सक्छ ।
यदि पुनः तपाईंलाई एक मजबुत इन्टरनेट कनेक्सन प्राप्त भएन भने र फोनमा यो छोटो लाइन प्राप्त भयो भने यसलाई नढाक्न सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यही एक यस्तो चिज हो, जसले तपाईको फोनलाई क्यालकुलेटर भन्दा कयौ बढी काम गर्न सक्ने डिभाइसको रुपमा परिणत गर्छ ।
पृथ्वीनारायणले बनाएको देशमा बसेर देशै च्यात्नेहरूले जब उनको नामसमेत लिन अस्वीकार गरे !